‘ओल्ड केयर सञ्चालनको तयारीमा छौँ, पाँचतारालाई उद्यमशीलतासँग जोड्छौँ’ - Nepal's No.1 News portal
उद्यमशीलतामा सहकारीलाई जोड्दै देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा अहिले धेरै सहकारी संस्थाहरू सक्रिय छन् । काठमाडौंको सिनामंगलमा रहेको पाँचतारा साकोसले पनि समुदायको विकास र रोजगारमूलक कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । पाँचताराको आगामी योजना र रणनीतिका सम्बन्धमा सञ्चालक राधा कडरियासँग कुमार ओझाले गरेकाे कुराकानीः
सहकारीले गरिरहेका क्रियाकलापहरु के–के हुन् ? संस्था कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ?
–संस्था स्थापना भएको १३ वर्ष भयो । लगभग अहिले ६५ करोडको कारोबार छ । ३५ सय सेयर सदस्य हुनुहुन्छ । क्रियाशील सदस्य २२ सयको हाराहारीमा हुनुहुन्छ । संस्थाको सेयरपूँजी करिव ७ करोड छ, हामी निजी भवनमा छौं ।
तत्काल संस्थाले बचत ऋणकै कारोवारलाई प्राथमिकता दिएको छ । संस्था महानगरपालिकाभित्र भएको कारणले पनि लगानी अन्य क्षेत्रमा गर्न सकिरहेको छैन ।
हामीले अब बचत ऋणको मात्र कारोबार गरेर हुँदैन, उत्पादनको क्षेत्रमा पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने योजना अघि सारेका छौं । संस्थाले नीति, विधि र प्रक्रियामा काम गरिरहेका छौं । हामी यही लक्ष्मीपूजाको दिन एटिएम उद्घाटन गर्दैछौं । एसएमएस लगायत प्रविधिमैत्री रुपमा सबै सदस्यहरुसामू पुग्ने वातावरण बनाएका छौं ।
हाम्रो संस्थामा करिब १६ सय महिला सदस्यहरु हुनुहुन्छ । महिलाहरुको सक्रियता यस सहकारीमा रहेको छ । सञ्चालक समितिमा समेत हामीले ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गरेका छौं । महिलाहरुको जीवनस्तर उकास्ने कामका लागि संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
उद्यमशीलताका, उद्घोषणकला लगायतका तालिमहरु सञ्चालन गर्दै आएका छौं । अचार उत्पादन, बेकरी तयार गर्ने जस्ता उद्यमशीलतासँग जोडिएका गतिविधिमा संलग्न गराएका छौं । केही–केही समस्या भए पनि निरन्तरको प्रयासबाट सदस्यहरुलाई व्यवसायिक बनाउने अभियानमा अग्रसर गराएका छौं ।
संस्थाले सदस्यहरुलाई ७–८ प्रतिशतमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । ‘तपाईहरुले उत्पादनमात्र गर्नुहोला बजारमा लगेर बेच्ने काम हामी गर्छौँ’ भनेर प्रोत्साहित गर्ने गरेको भए पनि महिलाहरुको सक्रियतामा केही कमी आएको छ । हामी हाम्रा उद्यमी महिला दिदीबहिनीहरुलाई उत्पादनमा जोड दिन्छौं र बजार प्रवद्र्धनका लागि संस्थाले नै व्यवस्थापन गर्छौं ।
संस्थाले लगानी गर्न चाहेका क्षेत्रहरु के–के हुन् ?
–हामीलाई अलिकति कार्यक्षेत्रको कुराले पनि काम गर्न दिएको छैन । हाम्रो पाँचवटा वडा र कागेश्वरी मनोहरा दुईवटा क्षेत्र हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । भक्तपुर, ललितपुर नै जान पाउँदैनौं । अब हामी चाँडै उपत्यकाभित्रको कार्यक्षेत्र थप लिँदै छौं ।
‘ओल्ड केयर’का लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौं । हामीले संस्थाका सदस्यहरुलाई बृद्ध अवस्थामा आबद्ध भएर बस्नको लागि सहज होस् भनि नियमित बचत गर्ने सदस्यहरुलाई त्यहाँ निःशुल्क बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने अभियान अघि बढाएको छ ।
कृषि र उद्योगमा लगानी गर्ने अवस्था कस्तो छ ?
–कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने हाम्रो ठूलो चाहना हो । केही–केही सदस्यहरुलाई कृषि उत्पादनका लागि सस्तो ब्याजदरमा लगानी गरेका पनि छौं । जसको ब्याजदर ११ प्रतिशत छ । अब हामीले ९ प्रतिशतमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेका छौं ।
केही महिलाहरुको अवस्था नाजुक थियो, जसको आर्थिक अवस्था उकास्नका लागि हामीले गरेको लगानी सार्थक भएको छ । थुप्रै उदाहरणीय कामहरु भएका छन् । यसलाई निरन्तरता दिने अभियानमा हाम्रा योजनाहरु तय भएका छन् ।
कोरोना महामारीमा के–के गर्नुभयो ?
–कोरोनाको प्रकोपमा समेत हामीले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर कार्यालय सञ्चालन ग¥यौं । र, सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान ग¥यौं । समुदायमा आधारित संस्था भएकोले निरन्तर सदस्यहरुको नजिक रहेर काम ग¥यौं ।
हामीसँग ३५ लाख भल्भ इन्स्योरेन्स थियो । तर, पचास लाखसम्म नगद राखेर सदस्यहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्यौं । हामीले नै पहिलोपटक सदस्य ऋणीहरुलाई दश प्रतिशत ब्याजमा छुट दिने काम ग¥यौं । समस्यामा परेका सदस्यहरुलाई राहत दिने लगायतका काम गरेका छौं ।
दोहोरो सदस्यताले कस्तो असर पारेको छ ?
–एक व्यक्ति, एक सहकारीको कुरालाई परिपालना गर्नु पर्दछ । हरेक सदस्यले आफूलाई मन पर्ने सहकारी छानेर कारोबार गर्नु प¥यो । संस्थाले पनि एउटै मात्र सहकारीको सदस्य बन्न प्रेरित गर्नु प¥यो । एक व्यक्ति एक सहकारीलाई कायम गर्नु पर्दछ । तर, यसका लागि केही समय दिनु पर्दछ । आजको भोलि नै कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भन्ने हो भने सम्बन्धित निकाय असफल हुन्छ । तर, राज्यको कानून नियमलाई सबैले पालना गर्नु पर्दछ ।